ရခိုင်အမျိုးသားများပါတီဝင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်ပုံ
မြေသိမ်းမှုကြောင့် လယ်သမားတွေရဲ့ နစ်နာမှုများ
ဒါကတော့ အုကံသမား၊ အခွင့်အရေးသမား ၊ အရေချုံ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲု့ကိုတင်စည်းဝါးရိုက် ချိန်ကိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးလုပ်ပြီး အနေချောင် အစားချောင်မဲ့ လိုင်စင်ရထားသူတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်က မလေးရှား “လဝက” အပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
Feb 09, 2014 03:52 AM
ဒီအခြေနေေ၇ာက်ကုန်တာ မဆန်းပါဘူး။ ဒီထက် ပိုမဆိုးပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရမယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းက တကယ် ရှိတဲ့ ရိုးရိုးသားသားရိုဟင်ဂျာတွေ နှိပ်စက်ခံရတာတွေကို သတင်းစာတွေ မှာ သတင်းမှောင်ချထားခဲ့ပီး ပည်သူတွေ ဘာမှ မသိကြဘူး။ နောက်ပီး ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတလျောက်လုံး နေ့ရောညပါ စောင့်ကြပ်နေတာ မဟုတ်တော့ ခိုးဝင် တာလဲရှိ။ ငွေယူပီး မသိချင်ယောင်ဆောင်တာတွေလဲ ရှိ။ အခုကျမှ နဂိုကရှိတဲံ့ ကုလားရော နောက် ခိုးဝင်တဲ့ကုလားရော အကုန်လိုက်သတ်တော့ ဇာတ်ကရှုတ်ကုန်တာပေါ့.အစိုးရက စဉ်းစဉ်းစားစား မျှမျှတတ လုပ်သင့်နေပြီ
Feb 09, 2014 03:51 AM
World media are bias for Rohingya Muslims and Rohingya Muslims are described as innocents or victims of Arakan people & Burma government.
Rohingya Muslims are illegally staying in Burma attacking Burma and spreading fabricated history, exaggerated stories, misleading news labeling Arakan people & Burma government as evil society.
Because of that the number of innocent Burma citizens being killed in Burma Malaysia, Indonesia by some groups (Rohingya are directly or indirectly involved ) are increasing . Rohingya are highly skilled Terrorists. They have never been arrested in Malaysia.
Feb 07, 2014 10:33 AM
အုကံသမားတို.ရဲ. အုကံအဖန်၊ လန်ုကုပ်လုပ်ုကံ ဇာတ်လမ်းလေးဖတ်နေရပါတယ်။ မင်းတို.ရဲ. ကလိမ်ကကျစ်ဥာဏ် ဒါအကုန်ဘဲလား။
They should not go over there because Malaysia and Indonesia have many Islamic terrorist groups.